Peach kwachaa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Peach kwachaa
Iberibe nke piich bụ ihe mgbu na nke a chọrọ.
Ịchọrọ ịkọ osisi mara mma na ubi gị ma na-anakọta mkpụrụ osisi dị ụtọ n'afọ ọ bụla? Jiri nlezianya gụọ ma hụ ihe anyị ga-agwa gị. Ebumnuche bụ isi nke ịkụcha ihe niile dị iche iche, tinyere mkpụrụ osisi ọ bụla ọzọ, bụ iji hụ na alaka osisi na-amị mkpụrụ na-eto eto, na-eto eto na mkpụrụ osisi na-amị mkpụrụ, na-ekesa ya kpamkpam n'obe nke osisi ahụ.
Atụmatụ nke mmiri kwachaa piich
Iji zere ndakpọ olileanya na ndakpọ olileanya, ilekọta osisi dị egwu dị ka piich kwesịrị ịbụ ihe nṅomi-ziri ezi, na-eleghara obere ihe anya. Ya mere, anyị na-atụle n'ụzọ zuru ezu ọrụ dị oke mkpa - piich kwachaa, rụrụ na mmiri. Egwurugwu na-asọ oyi na-eme ka ọ bụrụ okpueze dị na nso osisi, t.
Na-elekọta piich na mmiri - ọrụ a na-arụ na nrụrụ
Osisi piich bụ otu n'ime ubi ubi kachasị ochie nke mmadụ na-azụlite. Ná mmalite, a na-eto osisi a naanị n'ala ndị na-ekpo ọkụ ọkụ. Ma ruo ọtụtụ afọ, piich na-eto ma anyị. Nke a ga-ekwe omume n'ihi n'eziokwu na ụdị mkpụrụ osisi ndị a dị mma na-eguzogide oyi.
Otú e si emeso akwụkwọ peach epic
Egwu bụ osisi dị nro nke na-atụ egwu ntu oyi, pests dị iche iche, na, n'ezie, ọrịa. Otu n'ime ihe kachasị njọ ma dị ize ndụ a na-akpọ piich akwukwo curl. Kedu ihe ọ bụ, na otu esi emeso ya, gwa gị ọzọ. Ị ma? Site na ebe piiz gbasaa gburugburu ụwa, a pụghị ịdabere na ya. Ndị nchọpụta ekpebiwo na ọkpụkpụ na-ahụ anya Prunus davidiana Franch, nke dị na Beijing (China), kacha nso ya.